FIANARANA FAMPITAN-DAVITRA: Ireo fepetra takiana miantoka ny fahombiazana - Journal Madagascar
Tsy toy ny tamin’ny taona lasa fa niakatra ny taham-pahafahan’ireo mpianatry ny oniversitem-panjakana fampitan-davitra (CNTEMAD) avy ao amin’ny taona voalohany nifindra taona faharoa. Raha ho an’ny lalam-piofanana lalàna (droit) izao dia niakatra 35 % izany raha toa ka 29 % ny tamin’ny herintaona, araka ny tarehimarika nomen’ny tale jeneralin’ny CNTEMAD, Djohary Andrianambinina. Niakatra 45 % kosa ny taham-pahafahana ho an’ny taona faharoa hiakatra taona fahatelo. Nambaran’i Djohary Andrianambinina fa efa manomboka zatra ny mpianatra rehefa eo amin’ny taona faharoa satria hainy amin’izay ny mifehy ny tenany sy mandamina ny fianarany. « Mitaky fahaleovantena sy hentitra ny fampianarana fampitan-davitra. Fepetra tsy maintsy ilaina ireo raha te hahomby », hoy hatrany izy.
Raha zatra nomena lesona, tenenina vao mianatra lesona na manao enti-mody ny mpianatra tany amin’ny lisea dia mifanohitra amin’izany ny fampianarana ambaratonga ambony fampitan-davitra. Ny 10 % ihany no omena ny mpianatra amin’ny alalan’ny boky, tsy misy « cours » atrehina isan’andro tahaka tany amin’ny lisea fa isaky ny « regroupement » ihany no mihaona amin’ny mpampianatra. Noho izany, anjaran’ny mpianatra no mikaroka ny 90 % ny fahalalana fanampiny. Izany indrindra mahatonga ny mpianatra mikavihavia rehefa eo amin’ny taona voalohany satria mila manova fomba fiasa. « Nahafa-po ny voka-panadinana tamin’ny fanadinana enim-bolana faharoa na fanadinana farany vokatry ny fampitaovana ny ankizy ara-potoana amin’ny boky », hoy ny tale jeneralin’ny CNTEMAD. Nohamafisiny fa efa nisokatra tamin’ny volana oktobra 2018 ny fisoratana anarana ho an’ny taom-pianarana 2018-2019 ary mbola mitohy izany. Tsy misy toerana voafetra ny an’ny CNTEMAD fa misokatra ho an’ny mpianatra rehetra na ireo mpiasa mbola te hanohy ny fianarany. Amin’ny maha oniversitem-panjakana ny CNTEMAD dia manana vina hanakaiky ny vahoaka hatrany ny oniversite. Distrika 44 amin’ny 119 efa misy ivon-toerana. « Efa nisy ny fifampiresahana tamin’ny lehiben’ny distrikan’Androy, Analalava ho fanitarana ny oniversite », hoy i Djohary Andrianambinina.